UJutoh: ukwenza incwadi ye-e kwasekuqaleni | Zonke iReaders
Uyenza njani i-e-ncwadi eneJutoh
UIrene Benavides | | eBooks, software
Ngokwesiqhelo xa sithetha yenza i-ebook ekuqaleni Sicinga nge-Sigil (ukuba sifuna ukwenza i-ePUB), i-LibreOffice extensions okanye ezinye iinkqubo ezifanayo, ikakhulu kuba kwiimeko ezininzi Zisimahla kunye nezicelo zamaqonga amaninzi, ezenza ukuba kube lula ukufumana kwaye zitshiphu.
Nangona kunjalo, ngaphakathi non-free iinketho Sifumana iinkqubo ezipheleleyo ezinje nge Ngenisa ukusuka kwiAdobe (ngokufanelekileyo) okanye Jutoh, ezisivumela ukuba senze iincwadi ezilula ze-elektroniki, kodwa zenze nencwadana yeencwadi (esele sithethe ngayo kwamanye amanqaku). Namhlanje siza kugxila kancinci UJutoh waseAnthemion.
Jutoh yinkqubo yokudala incwadi ye-e epheleleyo kakhulu kwaye inomdla (ubuncinci ngokubhekisele kwimisebenzi yayo yokuqala), eyokugqibela iyayahlulahlula kwi-InDesign enomsebenzi onzima ngakumbi (kuba, nangona inokwenza i-ePUB, ijolise kulwakhiwo ngokubanzi); Ukongeza, iJutoh ifikeleleka ngakumbi (i-30 euros kwinguqulelo yayo esisiseko)
Nge iprojekthi enye, UJutoh usivumela ukuba sivelise incwadi ye-e Iifomathi ezahlukeneyo ziyahambelana namaqonga aphambili: ePUB, Mobipocket, .odf (OpenDocument), njl. Singayenza ngokwezifiso le projekthi kwasekuqaleni ukuze ibandakanye naluphi na ulwazi olunokuba lunomdla kuthi.
Njengoko ndihlala ndinyanzelisa xa sithetha ngeCaliber, le miba i kubaluleke kakhulu kuba bayayilungisa imethadatha yencwadi yethu kwaye imethadatha iya kuba luncedo kakhulu xa sifuna ukulawula ithala leencwadi lethu. Ngokucacileyo, ukuba yincwadi esiyidalayo ngokwembono yobungcali, nokuba iyathengiswa okanye incwadi yesalathiso yemveliso, umzekelo, ezi zinto ziqulathe idatha ekubhaleni koxwebhu zibaluleke ngakumbi.
Emva kokungena kwimethadatha sinokwenza ifayile ye inshorensi yencwadi yethu. Sifumana uthotho lweetemplate esizibonelelwa yile nkqubo ngokuthe ngqo, zilula kakhulu, kodwa sinokwenza ikhava yethu ngenkqubo yokuhlela imifanekiso (Gimp, umzekelo) kwaye ukhethe ngokulula lo mfanekiso uthathele ingqalelo Esona sisombululo siqhelekileyo se-e-readersI-600 × 800 yabafundi abaqhelekileyo aba-6,, i-758 × 1024 yabafundi be-6, HD kunye nezisombululo eziphezulu zabafundi beefomathi ezinkulu (umzekelo 824 × 1200, umzekelo).
Enye into ekufuneka siyithathele ingqalelo, njengoSigil, yile isitayile kule meko ayisiyi-CSS. Singazisebenzisa ezibandakanywa nguJutoh okanye senze ezethu iindlela (isicatshulwa esiqhelekileyo, izicatshulwa, isalathiso, izahluko, njl.njl.), Into ebaluleke kakhulu kwincwadi iyunifomu kunye nembonakalo eyakhiwe kakuhle.
Njengoko ubona ukuba ujonga inkqubo, indlela yokwenza nokwazisa izitayile yile ifana kakhulu nento esinokuyisebenzisa nakweyiphi na iprosesa yamagama njenge-MS-Office okanye iLibreOffice. Singongeza iphepha lesitayile kwifayile eyongezelelweyo.
Sebenzisa iipropathi zeprojekthi esinokuthi sizenze izalathiso zeendidi ezintathu: a Isiqulatho (TOC kubahlobo), Izalathiso zoonobumba y amanqaku ekugqibeleni (Sele uyazi ukuba i-ePUB, okomzuzwana ubuncinci, luhlobo lwamanqaku onokuwasebenzisa). Ukuba yincwadi elula, uJutoh unokwenza ngokuzenzekelayo uluhlu lwemixholo; Nangona kunjalo, ukuba le ncwadi intsonkothe ​​ngakumbi, kuyacetyiswa ukuba izenzele ngokwethu. Nokuba yeyiphi na imeko, ukuchazwa ngokuchanekileyo kwiphepha lesitayile kuya kubaluleka ukuze sikwazi ukwenza uluhlu lweziqulatho ezichanekileyo.
Ukuba usebenzise iSigil, le nkqubo iya kufana kakhulu nenkangeleko, nangona inezinto ezinokuqwalaselwa ngakumbi. Ngaphandle kwale, i umahluko ophambili kunye neSigil kukuba sine inani elikhulu leefomathi zokukhupha, esivumela ukuba senze iincwadi sicinge ngazo naziphi na ezona mfundi ziphambili kwintengiso kwaye sifumane iziphumo ezibekiweyo, kuba besingazukuguqula nje ifomathi enye ibe yenye (ngeempazamo ezinokubonakala kutshintsho) kodwa senze incwadi ngesakhiwo esichaziweyo kwaye siyithumela kwelinye ilizwe kwiifomathi esizifunayo.
Njengoko ubona, eli nqaku liphela yinkqubo yokuqala yenkqubo. Emva kwexesha (ukuba andikudiki kakhulu) siya kuba nakho ukuchukumisa ngakumbi kweyona misebenzi ibalulekileyo yeJutoh.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Wonderbook: Iincwadi ziphila kunye nePS3
Imvelaphi Jutoh, AmaPhepha eSitayile
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » software » eBooks » Uyenza njani i-e-ncwadi eneJutoh
Isifundo: Yongeza iifonti kwiPhepha lakho lohlobo lwePhepha
Zintanda Amadoda Alumkileyo: Ndifuna umfundi ophandle